Philips ayaa bilaabi doonta codsi loogu talagalay Mac kaas oo noo ogolaanaya inaan maareyno nalalka Hue | Waxaan ka socdaa mac
Soo saaraha Dutch-ka ah ee Philips waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo xulay nalalka casriga ah ee aan ku xakamayn karno amar toos ah ama codsi ku saabsan qalabkeena gacanta. Marka nalalka Philips Hue ay la jaan qaadayaan nidaamka deegaanka ee 'HomeKit ecosystem', tallaabada xigta ee ay shirkaddu qorsheyneyso inay qaado ayaa ah bilow barnaamij loogu talagalay Mac.
Codsigan, oo magaciisu noqon doono Hue Sync, ayaa noo oggolaan doona maaree dhammaan nalalka casriga ah ee aan ku rakibnay gurigeenna iyada oo loo marayo Mac, sida aan uga sameyn karno taleefannadeenna casriga ah, midkoodna iPhone ama uu maamulo nidaamka hawlgalka ee Google ee loo yaqaan Android. Waqtigan xaadirka ah taariikhda la bilaabayo lama bixin, laakiin waxaa lagu qiyaasayaa inay sameyn doonto rubuca labaad ee sanadka.
Waqtigan xaadirka ah, Mac App Store waxaan ka heli karnaa qaar ka mid ah codsiyada noo oggolaanaya inaan maareyno nal nalalka noocan ah, laakiin midkoodna lama xiriiro soo saaraha Dutch. Markii la soo saaray codsigii rasmiga ahaa, waxay u badan tahay in noocan ah dalabku shaqada joojin doono, Philips horeyba wuu u daryeelay. Sida caadiga ah noocyada noocan ah ee codsiyada ah ee u baahan iibsashada wax soo saarka jirka, codsiga Hue Sync waxaa loo heli doonaa soo degsasho bilaash ah.
Philips wuxuu ku dhawaaqay arintan qaab dhismeedka CES ee maalmahan lagu qabanayay Las Vegas, oo ay weheliso ku dhawaaqida codsiga Hue 3.0 ee qalabka ay maamusho iOS, waa codsi suuqa ku dhici doona rubuca labaad ee sanadka. . Noocaan cusub ee dalabku wuxuu na siinayaa fursado badan oo ka badan inta ay hadda bixiso, waxay leedahay interface isticmaale cusub iyo kontaroolo badan oo dareen leh. Philips wuxuu ku guuleystey inuu ku helo nook muhiim ah suuqa oo leh nalalka Hue inkasta oo ay tahay mid ka mid ah xalalka ugu qaalisan ee aan hadda ka heli karno suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Philips ayaa bilaabi doonta codsi loogu talagalay Mac kaas oo noo ogolaanaya inaan maareyno nalalka Hue